काठमाडौँ - सरकारी स्वामित्वका संस्थान सेतो हात्ती भइरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आफूलाई सक्षम संस्थाका रुपमा अगाडि उभ्याएको छ । संस्थानले मुनाफाको १८ प्रतिशत कर राज्यलाई तिर्दै आएको छ ।
कर तिरेपछि संस्थानको खुद नाफा करीब रु चार करोड ८५ लाख हुनेछ । कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालको स्पष्ट मार्ग निर्देशन, संस्थानको उच्च नेतृत्वको पहलकदमी र दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको लक्ष्यका कारण संस्थानले आफूलाई नाफा गर्ने निकायका रुपमा स्थापित गरेको हो । नाफाको निरन्तरतालाई अभिवृद्धि गर्दै थप सबल संस्थाका रुपमा उभ्याउन संस्थानले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषिमन्त्री खनालकै शब्दमा “संस्थान सरकारी संस्था भएकाले गुणस्तरीय, सस्तो, भरपर्दो र विश्वसनीय हुनुपर्छ । ब्राण्ड र प्याकेजिङ गर्दा ध्यान दिनुहोला, बरु झोल दूध आयात गरिन्छ तर धुलो दूध आयात खोलिन्न ।”
संस्थानले अघिल्लो आव २०७४÷०७५ मा रु चार करोड ८५ लाख ३९ हजार १९७ पैसा ३० खुद नाफा कमाएको थियो । सोही आवमा संस्थानले दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको बिक्रीबाट रु तीन अर्ब ९८ करोड ३९ लाख तीन हजार ३८३ पैसा ११ आम्दानी गरेको थियो । लगातार घाटामा गएको संस्थानले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै कार्यशैलीमा सुधार र गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिएपछि पछिल्ला वर्षमा निरन्तर नाफामा जान थालेको संस्थानका अध्यक्ष वसन्त गिरीले जानकारी दिए ।
संस्थान आव २०७३÷०७४ सम्म निरन्तर घाटामा थियो । “सरकारले धुलो दूध आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि संस्थान नाफामा जान थालेको हो”, अध्यक्ष गिरीले भने । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेबित्तिकै मन्त्री खनालले संस्थानको भौतिक तथा वित्तीय सुधार र गुणस्तरीय उत्पादनका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिदिएका थिए ।
विगतमा किसानले दूध बिक्री नभएर सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै दूधलाई धुलोमा रुपान्तरण गर्न उनले संस्थानलाई पटकपटक निर्देशन दिएका थिय । ‘मिल्क होलिडे’को अन्त्य गर्दै धुलो दूध उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै संस्थानको नाफा उकालो लागेको हो । मन्त्री खनालले धुलो दूध उत्पादन गर्ने संस्थालाई राज्यका तर्फबाट थप अनुदान दिइने व्यवस्था गरेपछि मुलुकबाटै ‘मिल्क होलिडे’ अन्त्य भएको थियो । पछिल्लो समय आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गरिरहेको संस्थानले स्थानीय दूध सङ्कलन, प्रशोधित दूध बिक्री, चिज, मख्खन र धुलो दूधको उत्पादन क्रमशः वृद्धि गर्दै लगेको छ ।
संस्थानले आव २०७३÷०७४ मा पाँच करोड ३१ लाख ८६ हजार ४८७ लिटर स्थानीय कच्चा दूध सङ्कलन गरेको थियो । आव २०७४÷०७५ मा पाँच करोड ४१ लाख २५ हजार ६४८ लिटर दूध सङ्कलन गरेको संस्थान आव २०७५÷७६ जेठ मसान्तसम्म चार करोड ६८ लाख १४ हजार ७७७ लिटर स्थानीय कच्चा दूध सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । संस्थानले प्रशोधित दूधको बिक्री पनि वृद्धि गर्दै लगेको छ ।
आव २०७३÷०७४ मा संस्थानले चार करोड ८४ लाख ६१ लाख ११२ लिटर प्रशोधित दूध बिक्री गरेको थियो । त्यसैगरी संस्थानले आव २०७४÷०७५ मा चार करोड ४३ लाख ९३ हजार १२४ लिटर र आव २०७५÷७६ जेठ मसान्तसम्म तीन करोड ६६ लाख ९० हजार ६३२ लिटर प्रशोधित दूध बजारमा बिक्री गरेको थियो । यसैगरी संस्थानले आव २०७३÷०७४ मा दुई लाख ३१ हजार ६६१ किलो चिज उत्पादन गरेको थियो । आव २०७४÷०७५ मा चिज उत्पादन केही घटेको छ ।
सो आवमा एक लाख ९४ हजार ७२० किलो चिज उत्पादन गरिएको संस्थानले जनाएको छ । आव २०७५÷०७६ जेठ मसान्तसम्म संस्थानले एक लाख ८५ हजार ६२६ किलो चिज उत्पादन गरेको छ । संस्थानले उच्च हिमाली भेगका चौरीपालकबाट उत्पादित दूधको व्यावसायिक विकास गरी विभिन्न जिल्लामा याक चिज उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
रसुवाको लाङटाङमा चिज उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएर दुग्धजन्य व्यवसायमा प्रवेश गरेको संस्थानसँग रामेछापको थोदुङ्ग र सोलुखुम्बुको पिकेलगायत १० स्थानमा याक चिज उत्पादन केन्द्र रहेको छ । त्यसैगरी संस्थानले मख्खन र धुलो दूधको उत्पादन पनि क्रमशः बढाउँदै लगेको छ ।
आव २०७३÷०७४ मा पाँच लाख २६ हजार ५८९ किलो मख्खन र चार लाख ६२ हजार १६६ किलो धुलो दूध उत्पादन भएको थियो । आव २०७४÷०७५ मा सात लाख ७४ हजार ९३ किलो मख्खन र सात लाख ९९ हजार ११३ किलो धुलो दूध उत्पादन गरेको संस्थानले आव २०७५÷०७६ जेठ मसान्तसम्म सात लाख ६७ हजार ८२४ किलो मख्खन र सोही अवधिमा नौ लाख सात हजार ९६३ किलो धुलो दूध उत्पादन गरेको थियो ।
दूग्धजन्य उत्पादनको व्यवसायमा अत्यधिक हिस्सा ओगट्न सफल संस्थानले दैनिक दुई लाख लिटर दूध खरीद गरी प्रतिदिन करीब एक करोड ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गर्दै आएको छ । उत्पादनमा विविधीकरण गर्दै आएको संस्थानले युवा पुस्ताको मन जित्न हालै मात्र चकलेट स्वाद भएको २०० एमएलको ‘फ्रेस मिल्क’ बजारमा ल्याएको छ ।
मङ्सिर २२ गते गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा विवाह गर्दै श्वेता खड्का
९ एसएसपीलाई डिआईजी बढुवाको तयारी : यी हुन् दाबेदार !
फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपतिको कोरोना संक्रमणबाट निधन
पुलिसको डण्डाले करङ दुखिरा'छ, आज जसरी नि पुल उद्घाटन गर्छु : पौडेल
के हुन् ओलीका सम्भावित हतियार ?
धरहरा बनाउने रमन कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध २१ करोडको भ्याट छलीको मुद्दा
अनेरास्ववियू बाँकेका जिल्ला नेतामाथि आक्रमण
ओलीको अध्यादेशको धम्कीले कोहि तर्सिनेवाला छैन : माधब नेपाल